Lucky Orly: Ukujwayelana nge imikhiqizo brand
Ukuhumusha AfrikaansShqipአማርኛالعربيةՀայերենazərbaycan diliEuskaraбашҡорт телеБеларускаяবাংলাbosanski jezikБългарскиCatalà粤语BinisayaChinyanja中文(简体)中文(漢字)CorsuHrvatskiČeštinaDanskNederlandsEsperantoEesti keelSuomiFrançaisFryskGalegoქართულიDeutschΕλληνικάગુજરાતીKreyòl ayisyenHarshen HausaʻŌlelo HawaiʻiHmoobHmoob Dawעבריתहिन्दी; हिंदीMagyarÍslenskaAsụsụ IgboBahasa IndonesiaGaeilgeItaliano日本語basa Jawaಕನ್ನಡҚазақ тіліភាសាខ្មែរкыргыз тили한국어KurdîພາສາລາວРусскийLatīnaLatviešu valodaLietuvių kalbaLëtzebuergeschмакедонски јазикMalagasy fitenyBahasa MelayuമലയാളംMaltiTe Reo MāoriमराठीМонголမြန်မာစာनेपालीNorskپارسیPolskiPortuguêsਪੰਜਾਬੀRomânăgagana fa'a SamoaGàidhligCрпски језикSesothochiShonaسنڌيසිංහලSlovenčinaSlovenščinaAf-SoomaaliEspañolBasa SundaKiswahiliSvenskaTagalogТоҷикӣதமிழ்татарчаతెలుగుภาษาไทยTürkçeУкраїнськаاردوOʻzbek tiliTiếng ViệtCymraegisiXhosaייִדישèdè YorùbáisiZulu
ukhona lapha: Ikhaya Ukukhangisa Lucky Orly: Ukujwayelana nge imikhiqizo brand
izinkampani nathi, okuyinto ukukhiqiza izimonyo Indlela ukunakekela, kanye zokuhlobisa, kancane ajwayelekile kubathengi emakethe yasekhaya. Ayikho TM Orli, okuyinto waziphatha womshini upende zokuhlobisa futhi enamels, kanye konke okudingekayo for eliphezulu nail ukunakekelwa, lokhu kuyinto okuhlukile ngokuqondene nalo mthetho. Futhi namhlanje kubeka Orly kuphela zingezinye zezibhedlela ezihamba futhi iningi likufuna. Bajwayelane ocebile umbala Palette enamels for nail design kungenziwa wavakashela ububanzi kwezimpahla Online-e-esitolo Stylesalon.ua. I-intanethi Boutique ikhathalogu ungakwazi ukukhetha varnishes eziyizintandokazi zakho, kukhona izinga ezahlukene kanye okusezingeni eliphezulu yokukhiqiza, kanye Ezokuphepha, futhi yebo, yizinhlobonhlobo imibala ngisho ukwakheka.
Ngakho-ke, usebenzisa Orly Lucky, Ungakha iyiphi manicure isitayela, ezisukela jacket zakudala, nemfashini yokuqedela izixazululo kuhilela ukusetshenziswa imibala ezicebile futhi enamels nge ezengeziwe visual effects.
15 iminyaka emakethe - kuba inkomba enhle
brand yezimonyo, abangongoti imikhiqizo nail design, ngokuvamile, libhekene esemncane. kahle, ngaphandle Revlon, Kungaba ngiziqhayise kweminyaka eminingi biography. Uma sikhuluma inkampani US Orly, ke imikhiqizo yayo baye bavele emakethe iminyaka engaphezu kwengu-15 edlule (hhayi ngakho kudala), udumo kodwa kusukela ezinsukwini zakuqala iye yazuza phakathi professional izingcweti nail sphere. Lokhu akusona isimanga, ngoba ezibanzi umbala Palette, ukuqina, noma kunalokho ukumelana, ezinengilazi - lawa nemingcele, eveza ukunakwa ochwepheshe, yiyo kanye le izici, ukuthi ukuhlukanisa Orly varnishes. Kodwa cishe omunye izinzuzo main of inkampani kanye nemikhiqizo yayo itholakala nobubanzi uhla varnishes ngokuya ukuthungwa.
Phela, inkampani akugcini ukukhululwa ezinombala ofanayo enamels zokuhlobisa shades enhle ocebile futhi ezijulile. Esikhathini esitolo inthanethi ungakwazi ukukhetha Stylesalon.ua varnishes, okuyinto zingafani matte noma ecwebezelayo, Translations namatshana. Futhi in the ezahlukene sha American has imikhiqizo, okuyinto ikuvumela ukudala Amazing kakhulu visual effects phezu plate nail. Kumayelana pearlescent lacquers kanye okuthiwa bezinto, ie enamels, lapho kukhona glosses zokuhlobisa bonke osayizi kanye ngemibala ehlukene (musa njalo kuhambisane umthunzi koqweqwe lwawo).
Induduzo eliphakeme phakathi kokusebenza
ukutshela, Orly varnishes ezidume kuphela ububanzi-tint yabo ukuthungwa Iphalethi, bekungeke kube ngokuphelele lesifanele. Ngemva koqweqwe lwawo kamakhi American - liphinde induduzo kalula isicelo, ukuzinza kanye nesikhathi yi, freshness manicure isikhathi eside. njengoba umthetho, abakhiqizi Muhle ngcono ngaso sonke isikhathi, imikhiqizo yabo hhayi kuphela, kodwa futhi ekufakeni, lapho liqhubeka ukudayiswa. Ngakho Orly lacquers ihambisane mncane futhi Ukugunda kakhulu ibhulashi, nokuthi iyiphi inqubo enameling jikisa art. Ngaphezu kwalokho, sibonga ibhulashi ezifana ukusebenzisa koqweqwe lwawo kalula, umane nangokunembile, unga ngisho ekhaya, ngaphandle asebenzise izinkonzo manicurist lochwepheshe.
I design ohlakaniphile shayela kanye nemingcele yayo ngokufanele ifaniswe ukuvumela inzuzo futhi ngokulinganayo ukusabalalisa koqweqwe lwawo zokuhlobisa phezu plate nail ngaphandle lokudlela. Ukungaguquguquki varnishes kusukela Orly - kungcono indaba ezahlukene, ngoba lokhu kungenye inzuzo enkulu yemikhiqizo. Ochwepheshe inkampani American wakwazi ukuthola kusho segolide, lapho koqweqwe lwawo njengenkulumo ukuba obukhulu kakhulu, okuyinto nzima isethi wakhe ibhulashi kanye nokusatshalaliswa iyunifomu izinzipho, futhi uketshezi kakhulu, ukuthi inqubo ukudaya iphenduka ibe umdlalo we "ijahe econsa upende". Ngenxa ukungaguquguquki ezifana (ephelele) ukuvenisha sisetshenziswa kalula futhi high kakhulu, kungekho uhlevane, nokuwohloka nezinye lezimanga. Kulokhu, ukuthi ukuhlala phakade enamathela ejabulisa ngisho amakhasimende olindele kunazo. Njengoba umkhuba imibukiso, Orly varnishes ukugcina ukubukeka yabo ikhanga isikhathi eside, ngakho manicure yakho ihlale fresh futhi flavorful.
Ngaphezu kwalokho inkampani ukhiqiza ezinengilazi nazo zonke ukwakheka ezidingekayo ukudala eliphezulu futhi manicure esitebeleni. Ngakho, ngaphansi eziklanyelwe isizinda kanye ukuvenisha kuphela, ukuthi baqinise umphumela, Batinikela koqweqwe lwawo ukuqina enkulu nakakhulu futhi ivumela ukuthungwa ukumambula ngokugcwele.
Khetha varnishes Orly nabesifazane abavamile, abakhetha ukuba zinakekele izinzipho zakho ekhaya, futhi amakhosi lochwepheshe. konje, ngokuqondile i-Masters uye wazakhela emaphaketheni ivolumu eziyingqayizivele 18ml. isamba okunjalo koqweqwe lwawo, ngokuvamile, ngokwanele isikhathi eside, kungakhathaliseki ukushuba ukusetshenziswa. Futhi lena enye inzuzo kwemikhiqizo TM Orly, okungukuthi, kuba ukonga e ukusetshenziswa. Ngakho-ke akumangalisi, nokuthi emashalofini egumbini lokugezela kaningi kukhona lokugoqa Orly, Nokho, kanye professional manicure amatafula nail design amakhosi.
Ayikho into etholakele.